Golaha wasiirada Puntland oo maanta ansixiyay xeerka soo saarida Macdanta Puntland | maakhir.com
Golaha wasiirada Puntland oo maanta ansixiyay xeerka soo saarida Macdanta Puntland
March 3, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Golaha wasiirada Maamulka Puntladn ayaa maanta shir ku yeeshay Madaxtooyada magaalada Bosaaso isaga oo uu shirkaas goob joog ka ahaa Madaxwayne Cade Muuse,shirkaas ayaa ujeedkiisu ahaa in la meel mariyo xeerka qeexaya in la soo saaro Macdanta ku jirta Gobolka Puntland,iyada oo ay shirkaas ka hadleen wasiiro badan.
Kulankan oo ahaa mid albaabadu ay u xirnaayeen ayaa waxaa shirgudoominayey madaxweynaha dawlad Goboleedka Puntland Cade Muue waxaana si buuxda xubnaha golaha xukuumada ay isku raaceen in la ansixiyo oo la sharciyeeyo qanuunka baarista iyo soo saarista macdanta iyo khayraadka kale ee dawlad Goboleedka Puntland si ay uga faa ii daystaan dadwaynaha reer Puntland.
Wasiirka Macdanta iyo Tamarta ee Puntland Xasan Cismaan Aloore ayaa shaaca ka qaaday inay waajib tahay in la meel mariyo xeerka iftiiminaya in la soo saaro Macdanta ku jira Gobolada Maamulka Puntland,taasi oo uu sheegay inay dhawor jeer ku guul daraysatay Xukuumada Puntland.
Mr Aloore waxa kaloo uu sheegay inuu xeerkan si Deg Deg ah loo dhaqan galindoon isaga oo la hor dhigi doono Golaha Shacaka ee maamulka Puntland, waxa uu si kulul uga jawaabay Sul”aal la waydiiyay oo ay ahayd inay Dawlada Federaalka ah lala socodsiinayo xeerkan iyo in kale waxa uu ku til maamay taasi inaanay xeerkan waxba ka khusayn Dawlada Federaalka Somaliya isla markaana ay Puntland xaq u leedahay inay baadho oo la soo baxdo Khayraadka ku jira Dhulkeeda.
Kulankaasi oo ahaa mid ay diirada lagu saaray sidii loo hir galin lahaa xeerka dhigaya in la soo saaro Patroolka ku jira Goboka Maamulka Puntland,kuwaasi oo ay horay Maamulka Puntland u sheegi jiray inay hir galinayaan oo ay dibada soo dhigayaan dhamaan Khayraadka ku jira Deeganada Maamulka Puntland.
Maamulka Puntland ayaa mudo badan waxa uu ku daahayay inay baadhidoonaan gooba badan oo ay la sheegay inay ku jirto Macdan sida meesha si wayn loo ilaaliyo ee Majiyana ee ku taalada Gobolka Sanaag, iyada oo ay meeshaasi ahayd halkii Puntland ku fashilantay Dhawor sano ka hor markii ay damacday inay xoog ku qadaan Goobtaasi balse ay kala kulmeen dharbaaxu xoogan oo kaga timi dadka Deegaanka.
waxaa wax lago naxa ah in maanta puntland ay isku sheegto dawlad jirka oo si cadaalad ah dadkeeda ogu shaqayso taas ma runbaa mes waa been.
waxaan orankara puntland kama jidho dawlad cadaalad ah oo umada reer punland ku hogaaminkarto nabad,hormar,cadaalad.
waxaan orankaraa waxaa ka jidho dawlad isirkala sooc ah oo uu madaxwayne u hahay nin isku gedaamay qabiilkisa oo karani ka dhigtay wiilkiisa suxufinaka dhigtay wiilkiisa afhayeena ka hadii aad iskud ahydo in aad la kulanto waxaa kaa hortagan 10 ceese riyoole ah.
dawladan ma aha mid ku dhisan hab qabiil oo qabiiladii ku bahoobay kama aysan qayb qaadan si cadaalad ah ee waxaa lagu soo dhisay nin jeclaysi iyo anaa reer hebal ah.
sidaa darteed waxaan si geesi nimo leh u oranyaa puntland nasiib daro ayaa u soo hoyatay.
« Xoog hayihii hore ee Q.M Mr Kofi Annan ayaa maanta ka dhoofay Dalka Kenya
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Bay ayaa gaadhay Magaalada Buur-Hakabo »